Shaqo hel: Denmark waxay u sheegeysaa muhaajiriinta inay ka shaqeeyaan macaashka samafalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Denmark War Deg Deg Ah » Shaqo hel: Denmark waxay u sheegeysaa muhaajiriinta inay ka shaqeeyaan macaashka samafalka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • dhaqanka • Denmark War Deg Deg Ah • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dowladda Denmark ayaa sheegtay in lix ka mid ah 10 -kii haween ee muhaajiriinta ah ee ka yimid Turkiga, Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe aysan shaqeynin.
Muhaajiriinta waxaa laga rabaa inay helaan shaqooyin si ay dheef uga helaan Denmark.
Xeerar cusub ayaa ka caawin doona muhaajiriinta inay ku dhex milmaan bulshada deenishka.
Tobankiiba lix ka mid ah dumarka soogalootiga ah ee 'aan reer galbeedka ahayn' ee Danmark ma shaqeeyaan.
Muhaajiriinta Denmark waxaa laga rabaa inay shaqeeyaan ugu yaraan 37 saacadood toddobaadkii si ay ugu qalmaan macaashka samafalka ee ay dowladdu soo saarto.
Ra’iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen
Xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogi doonaa kuwa qaadanayay kaalmooyinka samafalka dowladda Denmark saddex ilaa afar sano, laakiin aan gaarin heer aqoon sare oo deenish ah.
"Sannado aad u badan waxaan u samaynay xumaan dad badan annaga oo aan waxba ka dalban," ayuu yiri RW, oo intaas ku daray in qawaaniinta si gaar ah loogu talagalay haweenka soo -galootiga ah ee ku nool faa'iidooyinka, oo aan shaqeynin oo ka soo jeeda 'aan reer galbeedka ahayn'.
-Asal ahaan waa dhibaato markaan haysanno dhaqaale sidaa u xoog badan, oo ah meesha ay ganacsatadu ka dalbanayso shaqaale, markaa waxaan yeelannaa koox weyn, oo ay ugu horreeyaan haween asal ahaan aan reer galbeed ahayn, oo aan qayb ka ahayn suuqa shaqada, ayuu yidhi Frederiksen.
Denmark leeyahay mid ka mid ah mawqifyada ugu adag xagga socdaalka gudaha Midowga Yurub (EU).
Bishii Juun, waxay ku ansixisay sharci 70-24 cod, taas oo u saamaxaysa inay masaafuriso magangalyo-doonka oo ay ka baaraandegto codsiyada inta ay ka maqan yihiin dalka.